Emanzi Nokomisa Umshini wokucoca umoya, iBlower Air-Jinqiu
Umatshini woMgangatho (2)
Isixhobo sokucoca umatshini (3)
Isicoci sekhaphethi (4)
Umoya omoya (5)
Ulondolozo lwelitye iSysterm ecocekileyo
Ummeli wokuCoca iGrainte
Umatshini wokucoca iMarble
Iimveliso zethu zamkelwe kakuhle ngabathengi bethu kumgangatho ophezulu, amaxabiso okhuphiswano kunye nezona ndlela zilungileyo.
Shijiazhuang Jinqiu Trading Co., Ltd.ngumthengisi yobungcali kumatshini wokucoca, izixhobo zokucoca kunye nenkqubo yolondolozo lwelitye. Sinokubonelela nge-scrubber, burnisher, vacuum cleaner, ikhaphethi yokucoca, i-blower, i-wringer trolley, iinqwelo, ukhathalelo lweemabhile kunye negranite, ipolishi, ukulungiswa nokucoca iimveliso.
Abathengi abaninzi bacebisa iinkqubo ezintsha zokucoca kwimakethi yasekhaya kumazwe ahlukeneyo, kubathengi abohlukeneyo singabonelela ngothotho lwezisombululo njengoko kufuneka. Ukuza kuthi ga ngoku sithumela ngaphandle umatshini wokucoca kunye nezixhobo zokucoca kuMazantsi mpuma Asia naseYurophu ngaphezulu kwe-10years.
Ukurhweba ngeShijiazhuang Jinqiu kuya kuqhubeka nokubonelela ngamaqabane ethu ngetekhnoloji ephezulu kunye nokwanelisa iimveliso, ukwenza ubomi bethu kunye nokusebenza kube lula kwaye kube lula.
350L / 450L Tilt Iinkuphelostencils -B-110A / B-110B
Imabula yokuCoca i-Crystallizer-KLEEVER K2 / K3
I-MR5 iMarble yokuCoca i-Crystallizer
34L / 46L Icala lokushicilela eliphindwe kabini letroli -H0201 0202
Siqinisekile ukuba sizokwabelana ngeziphumo ezifanayo kwaye sakhe ubudlelwane obuluqilima bokusebenzisana namaqabane ethu kule marike.
Isisombululo segranite ekhanyayo
Ukukhanya kwegranite enemibala kunye nelitye lokurusa zonke iigranite zesakhiwo se-lamellar. Ukongeza kukufunxwa kwamanzi kwe-capillary yegranite, ngenxa yombala omhlophe okhanyayo, kuyakubakho indawo yamanzi okanye ungcoliseko, kwaye umkhondo wamanzi akukho lula ukuba unyamalale. Kwi...
Kutheni ukhetha ukuxubha oomatshini
Njengokuba imigangatho yeendawo zeentengiso kunye nezitishi ubukhulu becala ziyi-marble okanye i-ceramic tiles, ezo ntlobo zemigangatho zineemfuno eziphakamileyo zokucoceka, ngapha koko, zibonisa umfanekiso wendawo yoluntu. Ke ngoko, umsebenzi wokucoca kufuneka wenziwe ngenyameko enkulu. Ngokuthe ngcembe, ...
I-20'FCL NCL Inyathelo elinye leCrystallizer kunye neBellinwax yafika isitokhwe sabathengi ngaphambi kweholide yoMnyhadala weMuharram.
IiLabhoratri zeSizwe zeMichiza njengoko besisazi i-NCL, ukusuka ekuqaleni kwasekuqaleni kweminyaka yoo-1940 besenza iisepha kunye neeshampu zeshishini lokulungisa usapho, kwindima yobunkokeli namhlanje kwishishini lokugcina ucoceko njengomboneleli opheleleyo, onikezela uphawu kwihlabathi liphela. I-NCL ngu ...
Imveliso nganye yenziwe ngononophelo, iya kukwenza waneliseke.
I-SC-1500 Isantya esiphezulu seBurnisher
Umgangatho wokuhlaziya umatshini SC-004
BD2AE-Umgangatho wokuhlaziya umatshini
Umgangatho wokuhlaziya umatshini weBD1AE
I-BD3A ye-Multi-function Brushing machine
Umatshini wokubrasha we-Multi-function BD2A
Umatshini wokubrasha we-Multi-function BD1A
Umatshini osebenza ngemigangatho-SC002